TidyMarketer: Hub Marketing SaaS amin'ny lafiny iray ho an'ny fampielezana doka | Martech Zone
Alarobia, Septambra 7, 2016 Douglas Karr
Ny fandaniana amin'ny media manerantany dia mitombo amin'ny taha 5.1%, antenaina hahatratra $ 2.1 trillion amin'ny 2019, hoy i McKinsey. Vonona ny handany doka niomerika tafahoatra ny fandaniana amin'ny fahitalavitra in 2018. TidyMarketer dia nandefa vahaolana fampielezan-kevitra amin'ny marketing miaraka amina mpamorona drafitra haino aman-jery, kalandrie fampielezana, tatitra mandeha ho azy ary maro hafa, ho an'ireo ekipa sy masoivohon'ny marketing miaraka.
Ny sehatra SaaS dia ahafahan'ny mpivarotra mandrafitra, mandrindra, miara-miasa ary mandrindra ny fitantanana ny fampielezan-kevitra amin'ny sehatra tokana. Natao hanampiana ireo mpivarotra hanao fampielezan-kevitra mahomby amin'ny marketing mailaka ka hatramin'ny media sosialy, fampiratiana dokam-barotra, PR, hetsika ary maro hafa.
TidyMarketer ny Mpanamboatra Media Plan mandeha ho azy, feno benchmarks sy formula KPI, ahafahan'ny mpampiasa mamorona sy mampifanaraka ny paikadin'ny fampielezan-kevitra, mampiasa ny fizarana teti-bola sy ny fahombiazan'ny fampielezana fantatra haminavina ny valin'ny fampielezana. Mety ho varotra an-tserasera io, fametrahana apetraky ny finday, fitarika na maro hafa.
Ny endri-javatra TidyMarketer dia misy
Drafitra marketing - ahafahan'ny ekipa manangana drafitra marketing feno, feno sary mazava, ao anatin'izany ny vokatra vinavina sy ny fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery, vonona hizara amin'ireo ekipa anatiny na mpanjifa ivelany. Ny fitaovana mandeha ho azy dia manala ny filàna tatitra an-tanana, ary izany dia manampy ireo orinasa handrindra ny asany, hampihena ny mety hisian'ny lesoka ataon'olombelona ary ny fandehanana lehibe.
Kalandrie fampielezana - tarihiny sy alatsaho ny fiasa sy fampandrenesana eo noho eo, midika hoe afaka mandrindra fanentanana marobe amin'ny toerana iray afovoany ny ekipa
Task Manager - ahafahan'ny mpampiasa manome andraikitra ny mpikambana sy mitantana ireo mpandraharaha sy masoivoho ivelany.
Mandritra ny $ 25 / volana, ny haitao ara-tsosialy mamelombelona ny sehatra SaaS dia ahafahan'ny mpivarotra mandamina, mandrindra ary mitantana ny fanentanana, amin'ny alàlan'ny interface iray afovoany sy mora ampiasaina. Natao hanampiana ireo mpivarotra hanao fampielezan-kevitra mahomby amin'ny marketing mailaka ka hatramin'ny media sosialy, fampiratiana dokam-barotra, PR, hetsika ary maro hafa. TidyMarketer koa dia manolotra vahaolana maso ivoho.
Midira ao amin'ny TidyMarketer
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa amin'i TidyMarketer izahay ato amin'ity lahatsoratra ity
Tags: tetiandro fanentananadrafitra fanentananampitantana ny hetsi-panentananafandaniana doka nomerikamampiseho dokamailaka Marketingzava-mitrangadrafitra marketingprhaino aman-jery sosialytidymarketer